China Mini iinwele ibhrashi ngerabha enamathela ngerabha, uv ugesi, ukuhanjiswa kwamanzi mveliso kunye nabenzi | Yongsheng
Umsebenzi webrashi yeenwele
Ibrashi yeenwele zakudala
I-Detangler yebrashi yeenwele
Iplanga yokubamba iinwele
Ujikelezo lobungcali lokumisa iinwele ngebrashi
Isimbo esitsha esithandwayo seenwele
Mini iinwele ibhrashi
Umthi kunye nebrashi yeenwele zoqalo
Ibrashi yeenwele ezenziwe ngomthi
Ibrashi yeenwele zoqalo
Irabha yokutyabeka iinwele ngebrashi ngombala woshicilelo o ...
UV yombane, ugqithiso lwamanzi, ukukhanya iinwele zoshicilelo b ...
Ukutyabeka ngerabha, umbane we-UV, ukushicilela ukukhanya, amanzi ...
Ukutyabeka ngerabha, ukuhambisa amanzi, i-UV paddle yombane h ...
Iibrashi zeenwele ezijikeleziweyo ezinobushushu obuphezulu ...
Iibrashi ezincinci zeenwele kunye neerabha ezinemibala, i-UV ele ...
Umbala weerabha wokutyabeka iinwele zakudala kunye noyilo ...
Iibrashi ezincinci zeenwele ezinemigca yerabha enemibala, ugesi we-UV, ukuhanjiswa kwamanzi
Izinto: ABS, Irabha, Nylon, Bristles
Umbala: Umbala we-UV wombane, ukutyabeka ngerabha, Inaliti… ulwenziwo.
MOQ: 2400PCS / Uhlobo
Imveliso yangaphambi kwemveliso ------ isampulu ------ isiqinisekiso-seMpahla ------ yokuthenga-Icandelo ------ inxenye ------ Inaliti-Umgangatho ------ Icandelo lokuhlola ------ icandelo ------ umphezulu ------ ukugqiba-Umgangatho ------ uhlolo-lweNdibano-Umgangatho ------ uhlolo-Ukupakisha.
Iimpawu eziPhezulu zokuThumela ngaphandle
Asia, i-USA, Mid Mpuma / Afrika, iYurophu, Australia, India.
Ixesha Lead: 45-60days.
Iphakheji yesiqhelo: Ibhrashi nganye enengxowa ye-nylon evulekileyo. 24PCS / ibhokisi yangaphakathi. 240PCS / ibhokisi.
Indlela yokuhlawula: i-30% T / T idipozithi kwangaphambili, intlawulo eseleyo ngokuchasene nekopi ye-B / L emva kokuthunyelwa.
Ubungakanani obuncinci obuphathekayo- Ubungakanani obuncinci bokugcina, obulungele indlela yakho yokuphila exakekileyo yemihla ngemihla. Gcina ebhegini yakho ukuze uchukumise xa uhamba. Iibrashi ezincinci zeenwele zisebenza kakuhle kwizinwele ezimanzi okanye ezomileyo kwaye zilungele amadoda, abasetyhini kunye nabantwana. Senza iibrashi ukuba zincinci, zibe nomtsalane kwaye zilungele ubomi ekuhambeni. Ubungakanani obuncinci bokugcina okufanelekileyo, ngokulula kwisipaji sakho, kwaye abantwana bayayithanda nayo .Le bhulashi isebenza kakuhle kwizinwele ezimanzi okanye ezomileyo. Ifanele abasetyhini, amadoda nabantwana, iinwele ezinde okanye ezimfutshane, iinwele ezibhityileyo okanye ezishinyeneyo.
Ibhulashi lethu elincinci le-Detangler Hair Brush ekhethekileyo, i-bristles eqinile iyasilalisa ngobunono entloko ngelixa ivuselela ukuhamba kwegazi kunye nokomeleza iinwele zakho.
I-squirt Detanglers yenzelwe ngobuqaqawuli ukunciphisa iintlungu kunye nokukhusela iinwele kwiziphelo ezahlukileyo kunye nokwahlukana. Ikuvumela ukuba uhlambe ngamandla angaphantsi ukuze ukwazi ukuphazamisa ngomonakalo omncinci kwizinwele zakho.
Kananjalo sineentlobo ezahlukeneyo zeemilo entloko nakwisiphatho sinokukhethwa. Ukuphathwa ngokubambelela ngokulula kunokuba lula ukuphatha. Iintloko ezahlukeneyo zinokusetyenziswa kwimiboniso emininzi kwaye nangayo yonke into oyifunayo.
Ukusonga kunye noyilo oluhambelanayo lokuthwala ngokulula. Ubungakanani beMini bulingana epokothweni, kwisipaji, ibhegi yokubamba. Ifanelekile ukuhamba, umhla, ukuyokuthenga, ukuphuma.
Egqithileyo Isimbo esitsha esithandwayo seenwele
Okulandelayo: Iibrashi zeenwele ezijikelezileyo ezinobunzima bokumelana nobushushu kwisitayile esahlukileyo
Ezilahlwayo Iibrashi zeenwele
Ukuphulula iBrashi yeenwele
Ibrashi yeenwele ezenziwe ngawe
Isikwele seBrashi yeenwele
I-Wen Brush yeenwele
Izinwele zeenwele zomthi